ဒုတိယမြောက် လျှပ်စစ် Pickup Truck ကားကို ထုတ်လုပ်မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ GMC ! – MyMedia Myanmar
ဒုတိယမြောက် လျှပ်စစ် Pickup Truck ကားကို ထုတ်လုပ်မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ GMC !
GMC ကတော့ သူတို့ အနေနဲ့ မဝေးတော့မယ့် အနာဂါတ် မှာ ဒုတိယမြောက် လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး Truck ကားကို ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်တယ် လို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ကားကို စတင် ထုတ်လုပ်မယ့် နေရာ ၊ ဈေးနှုန်းနဲ့ မိတ်ဆက် လာမယ့်ရက် စတဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေတော့ ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး Truck ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Chevy Silverado 1500 လိုမျိုး Full-Size Truck ကား တစ်စီး ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာကတော့ ‌သေချာ နေပါ တယ်။ တစ်ဖက်မှာ လည်း GMC Sierra 1500 EV ကတော့ Hummer EV Truck ၊ SUV တို့နဲ့ အတူ Showroom ထဲမှာ ရောက်ရှိ နေပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Hummer Models တွေ ကတော့ ဒီထက် လည်း ပိုကြီးမားပြီး ပိုမို ဈေးကြီးမယ့် အနေအထားမှာ ရှိနေတာ ပါ။ ဒါပေမယ့် လည်း GMC ကတော့ သူတိုရဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး Truck ကားရဲ့ နာမည် ကို ပြောကြားခြင်း မရှိသေးသလို ခန့်မှန်း ရ‌သလောက်ကတော့ Sierra နာမည်နဲ့ ဖြစ်မလာနိုင်တာ သေချာပါတယ်။
GMC ရဲ့ ပြောကြားချက် အရတော့ အဆိုပါ ကားနဲ့ ပက်သက်မယ့် အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ထပ်မံ ပြောကြား ပေးသွားမယ်လို့ GMC နဲ့ Buick Brand ရဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ Duncan Aldred က ဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းက ထပ်မံ ပြောကြားရာမှာတော့ အဓိက အခြားသော ပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်တဲ့ Ford F-150 Lightning ၊ Tesla Cybertruck ၊ Rivian R 1T နဲ့ အသစ် ထပ်မံ ထွက်ပေါ်လာ မယ့် Ram 1500 EV တို့ကိုလည်း ထည့်တွက်ကာ အခုလိုမျိုး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက် တိုးတက် လာတာကတော့ တကယ့်ကို အရေးကြီး တဲ့အချိုး အကွေ့ ရောက်လာပြီလို့ ဆိုခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ Truck ကားအသစ် မှာတော့ GM ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နည်းပညာနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ Ultium Battery နဲ့ အတူ Ultium Drive နည်းပညာ တို့ကိုပါ အသုံးပြုလာမှာ ဖြစ်ကာ တစ်ကြိမ်အားသွင်း ရုံနဲ့တင် မိုင် ၄၀၀ Range လောက် အထိ မောင်းနှင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ ပြိုင်ဘက် F-150 Lightning အနေနဲ့ တစ်ကြိမ် အားသွင်း တဲ့ အခါမှာ အမြင့်ဆုံး Range အနေနဲ့ ၃၀၀ မိုင် လောက် အထိသာ မောင်းနှင် နိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကို ထုတ်လုပ်မယ့် နေရာအနေနဲ့ ကတော့ Hummers နဲ့ Chevy တို့ရဲ့ Truck ကား တွေ တည်ဆောက် ထုတ်လုပ်လေ့ရှိတဲ့ မီချီဂန် ပြည်နယ် ၊ Detroit မှာ ရှိတဲ့ Factory Zero စက်ရုံမှာပဲ ထုတ်လုပ်ဖို့ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Cadillac တို့လိုမျိုး အခု ဆယ်စုနှစ် အကုန်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကို ရာနှုန်း ပြည့်အသုံး ပြုဖို့ အတွက် ကိုတော့ Aldred က ဆက် လက် အတည်မပြု ပေးသွားသေးပါဘူး။ Detroit Free Press ကို ပြောကြားရာမှာ တော့ လျှပ်စစ် ကားတွေ ရဲ့ လျှင်လျှင် မြန် မြန် လွှမ်းမိုး မှု ကို ကြုံတွေ့ လာနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပဲ ဆိုသွားခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခု အနေနဲ့ ပြိုင်ဘက် ကုမ္ပဏီ အနည်းငယ်ပဲ ရှိသေးတယ် ဆိုပေမယ့် အရာရာ တိုးတက် လာတာ မြင် နေရပြီး GMC အနေနဲ့ လည်း ကောင်းစွာ နေရာရနေတာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း ဆိုသွားခဲ့ ပါ သေးတယ်။ အခု ထုတ်လုပ်မယ့် လျှပ်စစ် ကုန်ကားအသစ် ကတော့ GMC က အခုလို အမျိုးအစား နောက်ဆုံး ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း Colorado လို အမျိုးအစားကို လျှပ်စစ် ကားသီးသန့် အဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့ ရှိ မရှိ မေးမြန်းခဲ့ ရာမှာတော့ မှတ်ချက် ပြု ထားခဲ့ခြင်း မရှိသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ချေကတော့ ရှိနေတာ သေချာပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ GM အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၅ အရောက်မှာ လျှပ်စစ်ကား အသစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် အထိ ထုတ်လုပ် ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလို အခု ဆယ်စုနှစ်အကျော်မှာ တော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ‌ကားအမျိုးအစား အားလုံးကို လျှပ်စစ်ကားတွေ ဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ဒုတိယမြောက် လျှပ်စစ် Pickup Truck ကားကို ထုတ်လုပ်မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ GMC ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-07-21T16:31:13+06:30July 21st, 2021|MYCARS MYANMAR|